Gaas: Waa la qabtay askarigii Gaalkacyo ku dilay shaqaalaha Qaramada Midoobay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas: Waa la qabtay askarigii Gaalkacyo ku dilay shaqaalaha Qaramada Midoobay
A warsame 7 April 2014 4 April 2019
Gaalkacyo – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay dil laba sarkaal oo reer galbeed ah una shaqeynayay Qaramada Midoobay loogu geystay maanta garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
C/weli Gaas oo falka dilka ah cambaareeyey ayaa sheegay in la xiray askarigii dilka geystay iyo askarigii lahaa qoriga dilka lagu fuliyey, ayna baaritaan ku sameynayaan sababta keentay in lagu dilo saraakiishan Gaalkacyo.
Gaas ayaa sheegay in falka dilka nuucaan uusan horay uga dhicin Puntland, wuxuuna yiri “Falalkan oo kale Puntland taariikh uma lahayn, waxaana socda baaritaanno ku saabsan in ruuxa dilka geystay lasoo adeegsaday iyo in kale,”.
Madaxweyne Gaas ayaa qiray in ninka dilay labada shaqaalaha ajnabiga ah uu ka tirsanaa ilaalada garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo.
“Ruuxa dilka geystay wuxuu ka mid ahaa ilaalada garoonka diyaaradaha, mana la oga sababta ka dambeysay inuu shaqaalahan Qaramada Midoobay ka tirsan dilo,” ayuu yiri Gaas oo la hadlay VOA.
Madaxweynaha dowladda Puntland oo wax laga weydiiyey in falkaan yahay mid lala xiriirin karo Argagixiso, waxaa uu sheegay in askariga dilka geystay uu ka tirsanaa ciidanka dowladda isla markaasna aysan ka hor dhacayn baaritaanada socda.
Diyaarad gaar ah ayaa ka qaadi doonta Galkacayo maydka labada xubnood ee reer galbeedka ah, madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay ka wada hadleen madaxda sare ee UNODC u qaabilsan Soomaaliya geerida raggan iyo qaadistooda.
Hay’adda UNODC ee ay ka shaqeynayeen labada ajnabiga ee la dilay ayaa Puntland ka wadday howlo ka dhan ah bucad badeedda Soomaalida oo aad ugu badan gobolkaas.
Danjire Kay: Cudurdaar looma helayo dilka naxariis darrada ah ee shaqaalaha Qaramada Midoobay
Muqdisho: 5 sano oo lagu xukumay nin dharka dumarka kula haasaawi jiray ragga